သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်နှင့်အတူခရီးသွားများအတွက်ထိပ်တန်းသိကောင်းစရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်နှင့်အတူခရီးသွားများအတွက်ထိပ်တန်းသိကောင်းစရာများ
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ
သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူခရီးသွားဘို့ဤအထိပ်တန်းသိကောင်းစရာများသင့်ရဲ့စိုးရိမ်စိတ်လျော့ပါးကူညီသင့်တယ်. ပါစေရဲ့ကရင်ဆိုင်ရသောကြောင့်, သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူခရီးသွားစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပါသည်! သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ပိုပြီးစိတ်ဖိစီးမှုင်, သင့်ရဲ့စွန့်ခွာရန်အတွေးဖြစ်ပါတယ် တိရိစ္ဆာန်များ အိမ်မှာသို့မဟုတ်အခြားသူများ၏စောင့်ရှောက်မှုအတွက်. သိသာထင်ရှားတယ်, မင်းရဲ့လုပ်ဆောင်ပုံကိုဘယ်သူမှသူတို့နောက်မှာမကြည့်ဘူး! မှန်သော?
ဘာလုပ်ရမှန်းများအတွက်မြောက်မြားစွာရွေးချယ်စရာရှိပါတယ် သငျသညျအိမ်ကနေခရီးသွားလာကြသောအခါ. ခွေးဟိုတယ်များ, တစ် ဦး အိမ်စောင့်ငှားရမ်း, ဒါမှမဟုတ်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးလွှဲပြောင်း, တစ်ဦးချစ်စရာတဦးတည်းဆိုသော်ငြား, သင်၏အဆွေခင်ပွန်းဖို့ရွေးချယ်မှုအကြားရှိပါတယ်. ဤလူနှုနျးသောအသုံးအများဆုံးများမှာ. သို့သျောလညျး, တစ်ခါတစ်ရံမရှိကအခြားရွေးချယ်စရာသည်နှင့်သင်သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့သွားလာရန်ရှိသည်. ဒါဟာအတော်လေးခက်ခဲတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနိုင်ပါတယ်နေစဉ်, Save တစ်ဦးကရထားကိုသင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူခရီးသွားနေချိန်မှာသင်ကူညီလိမ့်မည်ဟုအချို့သောထိပ်တန်းအကြံပေးချက်များရှိပါတယ်!
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သိကောင်းစရာများ 1: တစ်ဦးကရယူထားသောယူခဲ့!
အသစ်တခုအရပျသို့ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်ဖြစ်ကောင်းသင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရလိမ့်မည်နိုင်ပါတယ်. ဒါကြောင့်သူကတတ်နိုင်သမျှဖြေလျော့ပေးခြင်းဖြစ်နေဆဲသေချာပါဝင်ပတ်သက်လူတိုင်းအတွက်တစ်ဦးအဆင်ပြေခရီးမှသော့ချက်အောင်. သူသို့မဟုတ်သူမ၏ပုံမှန်ကစားစရာကိုယူခဲ့, စောင်, သင့်ခွေးသို့မဟုတ်ကြောင်ကိုအဆင်ပြေစေမည့်အခြားပစ္စည်းများ. သူတို့ငြိမ်သက်ခဲ့ကြသည်မှားဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး? အနာဂတျမှာသင်ပိုမိုအဆင်ပြေအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူခရီးသွားကြစေဟုအဆုချသေချာအောင်လုပ်ပါ.
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သိကောင်းစရာများ 2: သို့သော်မ လွန်း အတော်များများကရယူထားသော…
ဒီသိသာဖြစ်ပါတယ်တူသောငါခံစားမိ, ငါမူကားမည်သို့ပင်ဖြစ်စေသင်တို့အဘို့ထဲကစာလုံးပေါင်းသွားပါ၏! သူတို့ကိုမပေးပါဘူး မိုးသည်းထန်စွာမုန့်ညက် သို့မဟုတ်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်အဆင်မပြေပွဲချင်းပြီးမှာသူ့ဟာသူသက်သာရာဖို့တိုက်တွန်းကြမည်မဟုတ်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသိပ်ရေကိုသောက်ကြကုန်အံ့! (ငါတို့သည်သင်တို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူခရီးသွားလှည်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိပေးခဲ့ပါ!)
Florence Pisa မှရထား
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သိကောင်းစရာများ 3: လေ့ကျင့်
သင်ကနဲ့တူသို့မဟုတ်မရှိမရှိ, သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူခရီးသွားခြင်းအတွက်ဤထိပ်တန်းအကြံပြုချက်များသည်သင်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုခုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုဆိုလိုသည်! သငျသညျခရီးသွားလာ start ရုံမရောက်မီ, အချို့သောသန်စွမ်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအဘို့ထိုသူတို့ယူ! အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အပိုရှည်လမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်သင့်ချစ်သူတို့ fluffy အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူတစ်ပြင်းထန်သော playtime ၏, သူသို့မဟုတ်သူမအမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ဖို့ပဲလွန်းပင်ပန်းစေခြင်းငှါ. သင်တစ်ဦးပြေးဘို့သိမ်းယူခံရဒီတော့ဝါသနာမဟုတ်ကြောင်းကြောင်တစ်ကောင်ရတယ်လျှင်, အထဲမှာသူတို့ကိုလှုံ့ဆော်ရန်ကြိုးစား. ဥပမာ - အလှပြုပြင်သည့်ကစားစရာများသည်ဖုန်မှုန့်များပုံစံမျိုးဖြင့်လာနိုင်သည်! ကျွန်တော့်ကိုယုံကြည်ပါ… ကျွန်မအတွေ့အကြုံရှိသည် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူခရီးသွားအတွက်!
ဘာလင် Potsdam မှရထား
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သိကောင်းစရာများ 4: သုတေသနသံရုံးလိုအပ်ချက်များ
ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုရှိ. နိုင်ငံအများအပြား quarantine ကာလလိုအပ်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူခရီးသွားအချိန်ဖြုန်းချင်လျှင်, သင်ဤကို double-စစ်ဆေးသေချာအောင်! နိုင်ငံအများစုခွေးရူးပြန်ရောဂါများအတွက်ရိုက်ချက်များလိုအပ်, bordetella (ခှေးအိမျချောင်းဆိုး), နှင့် parvo. တစ်ခုသံရုံး Call နှင့် သင့်ရဲ့သုတေသနအွန်လိုင်းပြုပါ တိုင်းပြည်၏လိုအပ်ချက်များကိုများမှာအဘယ်အရာကိုမြင်ရန်, အခါသင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းနေရာလေးကိုရှိသည်ဖို့သေချာအောင် နယ်စပ်ကိုဖြတ်ကူး.
အမ်စတာဒမ် Antwerp မှရထား
လိုင်လီ Antwerp မှရထား
ပဲရစ် Antwerp မှရထား
ကနျြးမာရေးလက်မှတ်များအားဖြင့်လိုအပ်သည် လေကြောင်းလိုင်းများ, နယ်စပ်အာဏာပိုင်များ, ဟိုတယ်များ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ရေးစင်တာ, နှင့်အခြားသူများတဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူခရီးသွား. အမြားအပွားကိစ္စများတွင်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူခရီးသွားသည့်အခါသင်၏အထဲမှာကျန်းမာရေးလက်မှတ်ရရန်လိုအပ် 10 သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုစတင်ရက်ပေါင်း. ၏တိကျသောလိုအပ်ချက်များသုတေသန သင့်ရဲ့ခရီးစဉ် အဆိုပါ VET သွားရောက်ခြင်းမပြုမီ, ဒါကြောင့်သူတို့ကလက်မှတ်အတွက်လိုအပ်သောအရာအားလုံးပါဝင်နိုင်ပါသည်.
အတော်များများကဟိုတယ်များ, ခရီးသွားအော်ပရေတာ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ရေးစင်တာ, လေကြောင်းလိုင်းများ, နှင့်အကောက်ခွန်နှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအေဂျင်စီများကသင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးလက်မှတ်တစ်ပုံနှိပ်စံချိန်လိုအပ်. အဲဒီအစားတိုင်းတတ်နိုင်သမျှဥပမာမိတ္တူ၏ reams ပယ်ပုံနှိပ်၏, စုံတွဲတစ်တွဲကိုချွတ် print ထုတ်ခြင်းနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူခရီးသွားသည့်အခါတစ်ဦးအီလက်ထရောနစ်မိတ္တူစောင့်ရှောက်.
Myscha Theriault သူမ၏သိပ္ပံသတင်းစာဆရာခင်ပွန်းနဲ့ကုမ္ပဏီကြီးဗရာဒိုခွေးကလေး retrieval နှင့်အတူအချိန်ပြည့်သွားရောက်ကာသူတစ်ဦးရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာရေးဆရာနဲ့နိုင်ငံတကာက-စုစည်းတင်ဆက်ခရီးသွားပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်ဖြစ်ပါသည်. သူမ၏အီလက်ထရောနစ်မိတ္တူနေရာလေးကိုနှင့်အတူ, သူမအမြဲလိုအပ်အဖြစ်သူမ၏ခွေး၏ကျန်းမာရေးလက်မှတ်များထုတ်လုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖွင့်.
“လိုအပ်သောအဖြစ်ဟိုတယ်ရဲ့စီးပွားရေးစင်တာပရင်တာငါ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗရာဒိုခွေးကလေးရဲ့ရိုက်ချက်မှတ်တမ်းများတစ် PDF ကိုမိတ္တူ print ထုတ်ခွင့်ပြု, ဥပမာကျနော်တို့လမ်းထဲကနေသူ့အဘို့ daycare တစ်ခုနေ့လည်ခင်းစာအုပ်ဆိုင်ဖို့လိုအပ်အခါတိုင်း. ဒါဟာနေ့နေ့ကဆင်းစက္ကူစုပြုံပြွတ်သိပ်စောင့်ရှောက်, နောက်ဆုံးမိနစ်အဘို့ပြင်ဆင်ကျန်ရှိနေစဉ်အတွင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ဇယားပြောင်းလဲမှုများ.”
Reggio Emilia Florence ရထားမှ
ဂျီနိုအာကို Florence မှရထား
Sestri Levant ရောမမြို့မီးရထားမှ
Parma Florence မှရထား
7. သုတေသနဒေသခံ Vets
ကိုယ့်အမှုတစ်ခုခုဖြစ်ပျက် လမ်းပေါ်မှာ, သင်တစ်ဦးဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ VET တွေ့ရှိရန်ရှာဖွေနေခံရဖို့မလိုချင်ကြဘူး. သငျသညျအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူခရီးသွား start ရှေ့တော်၌ကိုယ်သွားရောက်လည်ပတ်နေတဲ့ဧရိယာထဲမှာအနည်းငယ် vets များအတွက်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်အသံဖမ်း.
la Spezia ဗင်းနစ်ရထားမှ
ကျနော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူခရီးသွားဤထိပ်တန်းသိကောင်းစရာများသင့်ရဲ့အာရုံကြောအနည်းငယ်ဖြေလျှော့ပေးခဲ့ကြ! သင်နှင့်အတူမျှဝေဖို့ကိုအခြားထိပ်တန်းအကြံပေးချက်များရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုသိပါစေ တစ်ဦးကရထား Save နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်း. ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှနားထောငျခစျြတင့်!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်နှင့်အတူခရီးသွားများအတွက်ထိပ်တန်းသိကောင်းစရာများ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-traveling-with-your-pets%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#animallover #တိရိစ္ဆာန်များ #ကြောင် #ခွေး #အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် #pettips #travelingpets #travelwithpets europetravel trainjourney
ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားတရုတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား
Nockherberg Starkbierfest – မြူးနစ်ခိုင်ခံ့ဘီယာပွဲတော်